IFTIINKACUSUB.COM: Faqiir qarash badan: “Laankaruusar gado, galaydana soo bari.”
Faqiir qarash badan: “Laankaruusar gado, galaydana soo bari.”
Qofka caadiga ah ee sida hagaagsan u fekeraa wuxuu isku eegaa waxa soo gala iyo wuxuu qarash ahaan bixiyo. Hadii uu bishii helo boqol doolar, wuxuu u qorsheeyaa inaan qarashkiisu ka badan boqolkaas. Kuwa sii ba caqliga fiicani waxaay maanka ku hayaan inay wax ka dhigtaan, haday suurtagal tahay.
Si midhaas la mid ah qofka caadiga ahi xoogaga soo galo si miyir qabta oo uu ka fekeray buu u isticmaala. Wuuxu iska ilaaliiyaa inuu daa daadiyo. Qofka lacagta ku ciyaara Soomaalidu magac bay u bixisaa, waxna uma dhigmaan noloshana meel kama gaadho.
Dawladaha waxa maamula dad. Dadka dawladaha maamulaa qorshay dejistaan. Waxaay ka fekeraan waxa soo gala inaanay wax ka badan gelin. Waxaay sidoo kale qorsheeyaan sida ugu haboon ee ay shilin walba u isticmaali karaan. Kee bay tahay inuu galo waxbarasho, caafimaad, ciidan iwm. Keebay tahay inuu galo gaadiid, biyo, cunto, shaqo abuur, iwm. Waxa loo eegaa baahida jirta iyo sida ay u kala mudan tahay.
Dalka hayntiisu yar tahay (waa faqiire) waxa haboon inuu u fekero sidii qof faqiir ah. Nasiib xumadu waxaay tahay- waaba masiibee- marka qofku isaga oo faqiir ah uu doono inuu u noolaado sida taajirka. Doqon weeye. Doqonimadaasi waxaay masiibo tahay marka hantidaas yar ay maamulayaan cidaan aanay taabanayn faqrigaasi. Lagaba yaabee inuu isagu rabo inuu ka tanaado.
Bal hada u fiirso inta miisaaniyadda dawladda ku baxda shidaal iyo gawaadhi aan faa’iido u lahayn danyarta iyagu bixiyay lacagta la siiyay gaadiidkaas. Waa gaadiid raaxo oo uu ku tamashlaynayo qof.
Waxa cid lagu kalsoon yahay waa aan fogayn ii sheegtay nin madax ah oo diiday gaadhigii loogu talo galay xafiiskii loo soo magacaabay. Wuxuu yidhi anigu shaqsi ahaan waan ka sareeyaa inaan raaco gaadhi noocan oo kale ah. Marka waa in loo dalbaa gaadhi tobanaan kun oo doolar qiimihiisu yahay.
Dad badan baa marar aan yarayn is waydiiyay tirada badan ee madaxda dawladda ee qarashka aan yarayni ku baxo. Shilimaadka dalka soo galaa ma badna. Sida loo maamulaana maaha mid laga fekeray oo lagu saleeyey nolosha dadka leh ee loogu talo galay in wax loogu qabto.